काठमाडौँ — मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ‍ओली डिस्चार्ज हुँदै छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्‌गाका अनुसार प्रधानमन्‍त्री ओली शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज हुन लागेका हुन् ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँको पूर्ण स्वास्थ्यलाभपछि आज साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने भएको छ’,कार्यकारी निर्देशक डा. खड्‌गाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ओलीको २१ गते बुधबार दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रत्यारोपणका लागि ओली १९ गते भर्ना भएका थिए । ओलीका मिर्गौलादाता समीक्षा संग्रौला बुधबार डिस्चार्ज भएकी थिइन् ।
ओलीको २१ गते बुधबार दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रत्यारोपणका लागि ओली १९ गते भर्ना भएका थिए । ओलीका मिर्गौलादाता समीक्षा संग्रौला बुधबार डिस्चार्ज भएकी थिइन् ।श्राेतekantipur